The Panelarium Umtholampilo We-Urology - Umagazini Design
Umtholampilo We-Urology IPanelarium yindawo entsha yomtholampilo kaDkt Matsubara ongomunye wabahlinzayo abambalwa abaqinisekisiwe ukuthi basebenze ngohlelo lwe-da Vinci robotic upasuaji. Umklamo waphefumulelwa uvela ezweni ledijithali. Izakhi zohlelo lwe-kanambambili 0 no-1 zahlanganiswa endaweni emhlophe futhi zahlanganiswa ngamaphaneli aphuma ezindongeni nophahla. Iphansi lilandela futhi isici sokuklama esifanayo. AmaPaneli yize ukubukeka kwawo okungahleliwe kusebenza, kuba yizimpawu, amabhentshi, amakhawunda, amashalofu ezincwadi ngisho nezokuphatha umnyango, futhi okubaluleke kakhulu ngamehlo okuvikela ubumfihlo obuncane kweziguli.
Igama lephrojekthi : The Panelarium, Igama labaklami : Tetsuya Matsumoto, Igama leklayenti : Matsubara Clinic..
Umtholampilo We-Urology Tetsuya Matsumoto The Panelarium